प्रवास खबर Archives -
TK	 Sep 29, 2020 0
दुबई एयरपोर्टमा यात्रुहरु अ’लपत्र, जहाज रित्तै फर्कियो
विदेशमा अलपत्र ५१ हजार ४ सय ४१ जना नेपाली स्वदेशमा उद्धार
क्यानडामा गाडीको ठ’क्करले एक बालकको मृ’त्यु बालिका…
TK	 Aug 14, 2020 0
कुर्दिस्तान। वैदेशिक रोजगारीको लागि इराकको कुर्दिस्तान, आएका एक नेपाली युवाको मृ'त्यु भएको छ। कुर्दिस्ता,न, सुलेमानीको ,फेमिली मलमा कार्यर,त दोलखाका ३२ वर्षीय प्रदीप दाहालको मं,गलबार ,मृ'त्यु, भएको हो। उनी नेपाल फर्किने तयारीमा थिए। उनले…
मलेसियामा कार्यरत ११ नेपाली पाँच महिनादेखि अ’लपत्र
सोलुखुम्बु । मलेसियाको एक कम्पनीमा कार्यरत ११ नेपाली पाँच महिनादेखि अ'लपत्र परेका छन् । अल्फा कम्पनीमा कार्यरत सबैको पाँच महिनाअघि नै भिसा म्याद सकिएकाले अ'लपत्र परेको सोलुखुम्बु घर भई त्यहाँ कार्यरत घनश्याम श्रेष्ठले जानकारी दिए । नेपालमा…
विदेशमा अल’पत्र परेका ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकको उ’द्धार
काठमाडौं,२४ साउन । सरकारले विदेशमा अल'पत्र परेका ४५ हजारभन्दा बढी नेपाली नागरिकको उ'द्धार गरेको छ । को'भिड–१९ को विश्वव्यापी सङ्क्र'मणका कारण उत्पन्न असहज परस्थितिमा विश्वका ५८ देशबाट हालसम्म ४५ हजार ६६२ जनाको उ'द्धार गरिएको हो । उ'द्धार…
वरिष्ठ लोक गायक प्रेमराज महतका पतिपत्नीलाई को’रोना
TK	 Aug 8, 2020 0
काठमाडौं। अमेरिकामा बस्दै आएका वरिष्ठ लोकगायक प्रेमराजा महत र उनकी पत्नी कविता केसीलाई को'रोना सं'क्रमण देखिएको छ। अमेरिकाको मेरिल्याण्ड तथा पेन्सेलभेनिया राज्यका लागि नेपाल सरकारको महावाणिज्यदूतसमेत रहेका लोकगायक महतले सामाजिक सन्जाल…
नेपालीलाई कु,टपिट गर्ने सुपरभाइजर रा’मगोपाल प्रहरीको नि’यन्त्रणमा !
TK	 Aug 4, 2020 0
काठमाडौँ । मलेसियामा नेपाली सु’रक्षागार्डलाई नि,र्घात कु,टपिट गर्ने कपिलवस्तुका रा’मगोपाल मु’राऊले सोमबार प्र’हरी समक्ष आ’त्मस’मर्पण ग’रेका छन्। उनले गत असार २३ गते क्वा’लालम्पुरस्थित ए’मथ्री म’लमा ड्यु’टी गरिरहेका नवलपरासीका इ’स्लाम…
TK	 Aug 3, 2020 0
काठमाडौँ । बहराइनमा को’रोना भा'इरसबाट सं'क्रमित भएका सबै नेपालीहरु निको भएका छन् । सं’क्रमित सबै नेपाली पूर्णरुपमा निको भएर काममा फर्कि सकेको बहराइनका लागि नेपाली राजदूत पदम सुन्दासले बताए । उनका अनुसार बहराइनमा ५ सयभन्दा बढी नेपालीहरु…
मलेसियामा नेपाली सुरक्षागार्डलाई निर्घा’त कु’ट्ने नेपाली नै !
TK	 Aug 2, 2020 0
१८ साउन, काठमाण्डौ । मलेसियामा नेपाली कामदार माथि कुटकु’टगर्ने ब्यक्ति नेपालीनै भएको फेला परेको छ । मलेसियास्थित नेपाली दूताबासका अनुसार नेपाली सुरक्षागार्डमाथि कम्पनीका नेपाली सुपरभाईजलेनै नि’र्घात रुपमा कु’टपिट गरेका हुन् ।पी’डित नेपाली…
TK	 Aug 1, 2020 0
लन्डन । लन्डनस्थित हिथ्रो विमानस्थलबाट आज शनिबार दिउँसो दुई सयको हा'राहारीमा नेपाली स्वदेश फर्किएका छन् । लन्डनबाट कतार एअरवेजको क्यूआर ००४ नम्बरको फ्लाइटबाट उडेका नेपालीहरु कतारको दोहास्थित हम्माद अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा ट्रान्जिटका…
अन्तत : नेपाली सुरक्षागार्ड कु’टिएको घट’नास्थल प्रहरीले पत्ता लगाई छाड्यो !
काठमाडौं। मलेसियामा नेपाली दा'वी गरिएका एक सुरक्षागार्ड कु’टिएको घट’नामा त्यहाँथित नेपाली दूतावासले प्रहरीमा उ'जुरी गरिसकेको छ । नेपाली दूतावासको उ'जुरीसँगै त्यहाँको प्रहरीले घट’नाको अनुसन्धान थालिसकेको छ । यही बीचमा क्वालालम्पुरको वाङसा…
कुवेत प्रबेशमा नेपालीलाई रो’क
TK	 Jul 31, 2020 0
कुवेत, को'रोना भाइ'रसको सं’क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै कुवेत सरकारले नेपाली नागरिकको प्र’वेशमा रो’क लगाएको छ। कुवेतले नेपालसँगै भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, इरान र फिलिफिन्सबाट आउने मानिसहरूलाई प्र’वेशमा रो’क लगाएको हो। कुवेतले अगस्ट १…